संयौ अभिभावकको उपस्थितिमा सिड्नीमा अभिभावक वनभोज सम्पन्न !! - eNepal
संयौ अभिभावकको उपस्थितिमा सिड्नीमा अभिभावक वनभोज सम्पन्न !!
by enepal March 1, 2020 March 1, 2020 0227
सागर भुर्तेल, सिड्नी
नेपालबाट आउनु भएका अभिभावकहरुलाई गैरआवासीय नेपाली संघ अस्ट्रेलिया एनएसडब्लु राज्य परिषद्ले आयोजना गरेको अभिभावक बनभोज कार्यक्रम हिजो २९ फेब्रुअरी शनिबार भव्यताका साथ सम्पन्न भयो । पिकनिकमा ८ सय ५० भन्दा बढी अभिभावकको सहभागिता रहेको एनआरएनए अस्ट्रेलियाका प्रबक्ता नन्द गुरुङले वताए।
बनभोजमा जानका लागि विहानैदेखि सिड्नीका विभिन्न स्थानहरुबाट अभिभावकहरु जम्मा भएका थिए । अभिभावकहरुले वलंगन जाने बाटोमा रहेको नानटेन मन्दिरको दर्शन गर्नुभयो त्यसपछि ”न्यू साउथ वेल्सको नर्थ उलंघनको स्टुअर्ट पार्कमा गएर अभिभावक वृहद् वनभोज कार्यक्रममा परीणत भयो । अभिभावकहरुका लागि योगा कक्षा योग गुरु राजन आचार्य शर्माले सञ्चालन गरे । कसरी हास्न सकिन्छ, खुशीमा के रमाइलो छ भन्ने बारे योग गुरुको प्रवचन धेरैले रुचाएका थिए । योग कक्षा सकिएपछि गैरआवासीय नेपाली संघ अस्ट्रेलिया (एनएसडब्लु राज्य परिषद्) सेक्रेटेरी उषाकिरण बारियाले दोहोरी गीत कार्यक्रम सञ्चालन गरेकी थिइन् ।
कार्यक्रममा अभिभावकहरुको स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था पनि गरिएको थियो । खान खाइसकेपछि औपचारिक कार्यक्रम एनआरएनए अस्ट्रेलियाका सचिव दीपक पहारीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा एनआरएनए एसीसी डिपुटी कोअर्डिनेटर चुन्ना क्षेत्रीले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए । विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिलगायत लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्वको उपस्थिति रहेको कार्यक्रम सफलताकासाथ सम्पन्न भयो।
एनआरएनए भिक्टोरीया राज्य समितीको सल्लाहाकार कमिटीको नामावाली प्रकाशित (नामावली सहित)
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डमाथि जुत्ता प्रहार!!
छोरा छोरीलाई अस्ट्रेलीया पठाउन खोज्ने अविभावकले पढ्नै पढ्ने लेख
Manoj Poudyal September 12, 2019
एनआरएन अस्ट्रेलियाको चुनाबमा एकै परिवारका बाबु छोरीको विजय
Manoj Poudyal July 7, 2019 July 7, 2019
सस्तो मायाँ भन्दै फेरी आए मेल्बोर्नबाट कपिल सापकोटा
Manoj Poudyal April 16, 2019